Warar goos goos ah oo ku saabsan kubbada cagta | Sports, Ciyaaraha Caalamka iyo gudaha	SOOMAALIDA MAANTA
Warar goos goos ah oo ku saabsan kubbada cagta
Kulanti wacan asxaabey kuna soo dhowaada warar koob kooban oo ku saabsan kubbada cagta .
== Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester City Mario Bolatelli ayaa sheegay in ka tagaankiisii Premier ay sabab u aheyd ,Cimilada ,cuntada, saxaafada iyo gawari wadista Ingriiska oo dhamaabtood ah kuwa xun uuna dooqday magaalada Milan.
== Tababaraha xulka Spain Vicente Del Bosque ayaa sheegay in Torres iyo Michu ay wali mustaqbal ku lee yihiin xulka Spain ,laakin looga baahan yahay daadaal dheeraad ah ,iyadoo uu ka saaray xulkiisa ka hor tagaya Uruguay.
== Daafaca kooxda Manchester United Rio Ferdinand ayaa sheegay in kooxda Manchester United ay ka weyn tahay xulka Ingriiska uuna ku raaxeysto ciyaaraha Man United kadib wareysi gaar ah oo uu siiyay jariirada The Sun.
== Kooxda Manchester City ayaa eegeysa in ay soo qaadato weeraryahanka kooxda Liverpool Luis Suarez kadib markii ay iska iibiyeen Mario Bollateli ,waxaana ninkaan aad ujecel tababare Roberto Mancini.
== Weeraryahanka kooxda Manchester United Wayne Rooney ayaa sheegay in uu weydiistay tababaraha kooxdiisa Sir Alex Ferguson in laga wareejiyo rigoorooyinka kooxda kadib markii uu qasaariyay 10 rigoore waxaana laadi doona Van Persie .
2 Comments for “Warar goos goos ah oo ku saabsan kubbada cagta”
mahad!casri	03/02/2013 - 8:55 am	wlm to city suarez viva aguero
Reply	saajinka	03/02/2013 - 7:40 pm	sxbkay baloMario Bolatelli waxaan kala saari wayay inaanu fayoobayn iyo in kubad cilaaj ahaan ugu soo biirayba waayo?
afkiisa iyo dhagihiisuba isma maqalaan oo waa iska hadlaa sidi qof marfuucan qalan ah waxba hadlak dheerayn maayo
lkn se waxaan leeyhay uun sidaad u madoowdahay buu qalibigaaguna u madoow yahna kkkkkkkkkkkkkkk akhyaata fikir wanaagsan